I-TROPIC 2 STUDIO ENE-BALCONY ENGEMUVA - I-Airbnb
I-TROPIC 2 STUDIO ENE-BALCONY ENGEMUVA
Cần Thơ, Ninh Kiều, i-Vietnam
Igumbi e-i-boutique hotel ibungazwe ngu-Lam
Njengoba igama layo lisikisela, i-studio igqugquzelwe emahlathini asenkabazwe anombala oluhlaza okotshani wombala oyinhloko WEKAMELO le-Tropic, izinga lokushisa elifudumele lesimo sezulu sasenkabazwe libonakala lipholile ngenxa yombala opholile. Ingaphakathi legumbi njengesihlalo, i-closet kanye nombhede kuhlotshiswe ngezinto zemvelo ezifana noqalo noma i-pattan, kuletha umuzwa wokuhlala endaweni yemvelo.
Ikamelo linetafula nesihlalo kuvulandi, izivakashi zingahlala lapha futhi zijabulele isimo semvelo esisha kuyilapho zibona indawo
Kukhona i-cafe encane (nikeza ikhofi, itiye, ukudla okulula kanye nesidlo sasekuseni) phansi kwesakhiwo, indawo yesibili yamakhasimende yokuphumula
I-Emerald Homestay & Tea yi-Homestay entsha eyibhulashi lesibili le-Emerald Boutique Stay. Itholakala emgwaqweni onokuthula futhi ophephile obizwa nge-Tran Binh Trong. I-Homestay inakho konke okudingekayo ngesitayela esihlukahlukene, kusukela ku-Tropical and Neo Classical kuya e-Bohemian.
Emgwaqweni, kunezindawo zokudlela eziningi zendabuko zase-Vietnam, ezifana: ne-Hoi Do, Xua, Mi Khuya,... . Ngaphandle kwalokho, Iphinde ibe nezitolo zemfashini eziseduze, izinto ezilula ( umndeni we-Vinmart, Circle K, Coop Food). Kuthatha amakhilomitha angu-115 ukuya ezindaweni ezidumile zokuvakasha ezihehayo eziheha izivakashi hhayi nje ngezici zayo eziyingqayizivele zomdabu kodwa futhi nezimiso zamasiko, njenge-Ninh Kieu Quay, ichibi le-Xang Thoi, imakethe yasebusuku ye-Ninh Kieu, imakethe yakudala yase-Can Tho,...
phendula ngokushesha ngangokunokwenzeka, ngaphandle kusuka ngo-10:00pm kuya ku-6: 00 am (UTC+7: 00)
Hlola ezinye izinketho ezise- Cần Thơ namaphethelo